Adunyaa Koovid-19 Booda – Akkam Jirtuu? Nooraa!
Adunyaan keenya yeroo yeroottii haalotta addaa addaa kessummessaa jirti yeroo tokko tokko waraana,dhukuboota daddarbo fi kan biroo illee akka qabxi addaa addaatti ilaalu dandeenya. Kanaan wal qabatees bara 2019 keessa dhukuba koovid-19 jedhamu adunyaan kun keessummessu dandeesse turte. Dhukubi kunis biyya Chaayinaa kessaa kan kahee akka tahee qaamolee addaatin dudubatameera, Dhukuba kanaanis wal qabatee lubbuun namoota hedduu darbeera. Biyyotni Awuroopaa baayyeef Ameerikaan lubbuu lamilee baayyee dhabuu dandaahaniruu. Lamilee baayyeenis hojii idilee isaani akka dhaabaniif dirqamaniru. warshaalee baayyeef dhaabatonni baayeen hojetoota isaani hirrisaniruu.
Kanaan walqabatees adunyaan garamitti deemuu dandeessi? Namootni hojii idilee deemuu irraa dhorkaman akkam tahu? Jireenyi hawaassummaa akkam tahuu dandaaha? ikoonoomiin addunyyaa keenya garamitti deemuu dandaaha sodaan jedhu hunduma namaa keessatti akka umaamu shakki hin qabu. Mee jijiramoota ciccimoo jireenya namootaa keessatti umaman haa ilaallu.
Jireenya qofa galessumma
Koovid-19 erga babal’ate booda noomtni walitti qabamani taahu, waliin nyaachuu dhuguu , filmii waliin daawwachu , istaadiyoomi seenani kubbaa waliin ilaalufi kan biroon qoqqobbi cimaa irra buhee tureera. Kanaanis walqabate mobaayila harkaa, tabileetifi laaptoopi ofii firomfachuun dirqama tahee, kunis namootni walitti dhufeenya waliin qaban haalala irratti akka geggessan taasiseera.
Hojii idilee mana taahani dalagu (Work From Home)
Haala kanaan dura tureen hojii idilee hojjechuuf bari oboroo kaahani gara waajirra hojetani dhaquun dirqama ture, hatahuu malee koovid-19 booda hojeetoota fayyaa, waardiyaa irraan kan hafee hojilee baayyee mana tahaani inteerneeti fayadamuun hojeechuun akka aadaa haaraatti fudhatame.
Hoji dhabdummaa fi sodaa
Namootni hojii humnaan bulanif dubartootni hojii mana bunaa hojettan akkaan midhamoo taahaniru. Namootni hoji humnaa idilee hojeechuun jiraatan baayyeen sababa dhabatootniif namootni dhunfaa carraa hojii uumufii dandaahan hojii dhaabaniif lamilee hojii humnaatiin bulaniif yaaddoo guddaa tahee turun isaa ni yaadatama. Akkasumas dubartootni hojii mana bunaa hojeetan baayyennis yaaddoo dhukubi kun fideen galii argatan akka dhaban odeeffanno sassaabee tokko tokko ifa godhee tureera.
Oddeeffannoo adunyaa koovid-19 booda jedhu hangas yoo ilaalee kutaa biraa keessatti immoo dhaabatoota carraa dhukubni kun fideen “miliyoonara” taahanis waliin ilaala.
Nagaaf Buna Dhabinaa! Linki odeeffannoo armaan olii namaan gahaa!